Senator ka badbaaday Qarax caawa ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Senator ka badbaaday Qarax caawa ka dhacay Muqdisho
Waxuu ahaa qaraxii labaad oo mudo ka yar hal Todobaad ka dhacaya Caasimadda Soomaaliya, oo amnigeeda faraha uu kasoo baxayo iyadoo doorasho kusoo wajahan tahay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Miino la dhigay wadada qarkeeda ayaa labo ruux ku dhaawacday magaaladda Muqdisho caawa fiidkii, iyadoo goobta uu ka dhacay ay tahay kasoo horjeedka xarunta Baarlamaanka, kuna dhaw Madaxtooyadda.
Booliska ayaa sheegay in bam lagu qariyay bac taalla goob qashinka lagu shubo oo jidka Sayidka dhiniciisa ah uu qarxay xilli mashquul badan jiray, wax yar kadib salaadii Maqrib markii laga soo baxay.
Wararka ayaa sheegay in bartilmaameedka uu ahaa gaari oo la socday Prof. Cismaan Maxamuud Dufle oo ah Senator ka tirsan Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Qaraxaan, ayaa noqonaya midkii labaada mudo 3 maalmood ah ka dhacay Caasimadda.
Labo habeen kahor, Wasiirka cusub ee Shaqada iyo Arrimaha Bulshadda Duraan Faarax ayaa ka bad-baadey qarax lagula eegtay KM4 xili habeen ah. Wasiirka waxba kama soo gaarin, laakiin dad rayid ah ayaa ku dhaawacmay.
Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa caawa, kaasoo ka dhacay goob kamid ah meelaha sida aadka amnigeeda loo ilaaliyo, maadaama ay ka dhawdahay Villa Somalia, oo madaxda ugu sareysa dalka degan yihiin.
0 Comments Topics: al-shabaab madaxtooyada muqdisho qarax